Otu esi agu ma ghọta uzo ihu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu esi agu ma ghọta uzo ihu igwe
Hụ ihu igwe bụ ihe anyị na-eme kwa ụbọchị. Agbanyeghị, anyị nwere ike ghara ịghọta nke ọma mgbe ihu igwe na-arụtụ aka na maapụ. Anyị na-ahụ map nke Spain nwere ọtụtụ ahịrị, akara na nọmba. Gịnị ka ihe ịrịba ama niile ahụ na-ezo aka na ha?
Ebe i nwere ike ịmụta ihe niile mkpa ka ị mara gụọ map ihu igwe ma ghọta ya nke ọma. Naanị ị ga-agụrụ akwụkwọ ma jụọ ma ị nwere ajụjụ 🙂
1 Principleskpụrụ ụkpụrụ nke map ihu igwe
2 Mkpa nrụgide nke ikuku
3 Ihe akara na map ihu igwe
3.1 Nkọwa nke sistemụ nrụgide dị ala na nke dị elu
4 Typesdị n'ihu
Principleskpụrụ ụkpụrụ nke map ihu igwe
Maapụ ihu igwe na-enye anyị ihe nnọchianya dị mfe banyere ọnọdụ ihu igwe dị ugbu a ma ọ bụ amụma. Ihe a na-ahụkarị bụ ịtụle elu ala, ebe ọ bụ na ọ bụ ebe ahụ ka ihu igwe na-emetụta anyị. Echiche ndị mmadụ nwere maka ihu igwe dị mfe nghọta. Otutu mmadu choro ihe omuma banyere ya.dị ka mmiri ozuzo, ifufe, ma ọ bụrụ na e nwere oké mmiri ozuzo, akụ mmiri igwe, snow, Wdg
Akụkụ ndị a dị ezigbo mkpa ma a bịa n'ịghọta oge. Kedu ihe ọ na-ewe iji zoo mmiri, gịnị kpatara ya, na etu ike ọ ga-esi. Iji ghọta ọrụ nke ọtụtụ mgbanwe ihu igwe ọ dị ezigbo mkpa ịmata ikuku ikuku. Nsogbu nke ikuku, n'ọtụtụ ọnọdụ, na-ekpebi ihu igwe. N'ebe ikuku ikuku dị elu, ihu igwe dị mma ma kpọọ nkụ. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụrụ na ọ dị ala, a ga-enwe ikuku dị jụụ na ihu igwe na-adịghị mma.
Mkpa nrụgide nke ikuku
Mgbe e nwere usoro nrụgide dị elu ọ bụ ihe gbasara a denser ikuku uka. Nke a bụ n'ihi na ikuku dị jụụ ma kpoo karịa ikuku ndị gbara ya gburugburu. Mgbe nke a mere, ikuku dị arọ na-ada site na sistemụ nrụgide. N'oge a, ọ bụ mgbe ị nwere ihu igwe dị mma yana igwe ojii ole na ole.
N'aka nke ọzọ, mgbe anyị nwere sistemụ nrụgide dị ala, ọ pụtara na ikuku ikuku pere mpe. Nke a bụ n'ihi na ikuku dị na mmiri na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na-ekpo ọkụ karị. Ya mere, ikuku gbara ya gburugburu na-abanye n'ime, na etiti usoro ahụ, ebe ikuku ọkụ na-arịgo elu. Mgbe ìhè dị, ikuku na-ekpo ọkụ na-ebili ma na-ezute oyi oyi, ọ na-abanye n’ígwé ojii. Ka igwe ojii na-eto eto, urukpu a ma ama na-amalite.
Na usoro ebe nsogbu bụ nnọọ ala oké ifufe na-guzobere. Igwe ojii a ga-etolite ma gafee mbara igwe. Maka igwe ojii ndị a, ikuku ikuku a na-ekpo ọkụ, ga-ebili elu iji mepụta mmepe ụzọ.
Mgbe ị na-ahụ map ihu igwe gbalịa nyochaa otú ha si atụ nrụgide. Ọ bụ maka ịlele ihe ikuku dị n ’elu. Ngwunye nke mmụba bụ millibar. Nke a dị mkpa ịmara nyere na ọtụtụ usoro ihu igwe na-emetụta nrụgide nke ikuku. Uru ọnụọgụ nrụgide na oke osimiri bụ 1013 mb. Mgbe anyị nwere sistemụ nrụgide dị elu, ọ na-abịakarị ụkpụrụ nke 1030 mb. Otú ọ dị, mgbe usoro ahụ dị ntakịrị, ụkpụrụ ndị ahụ nwere ike ịdaba na 1000 mb ma ọ bụ karịa obere.
Ihe akara na map ihu igwe
Iji mụta akara ngosi kachasị mkpa na maapụ ihu igwe, ị ga-elebara anya nke akara akara ike. Iji gụọ nrụgide barometric n'elu, lelee ndị isobars. Ndị a bụ ahịrị akara akara otu uru nke ikuku ikuku maka ebe dị iche iche. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị ahụ maapụ ebe ebe edoro iche dị nso na ibe ya, ihu igwe ga-adị njọ. Nke a bụ n'ihi na n'ime obere oge, ụkpụrụ nrụgide na-agbanwe. Ya mere, enwere nsogbu nke ikuku.
Ahịrị ndị ahụ dị na akara na-agba ọsọ na ụzọ ikuku. A na-eduzi ifufe site na mpaghara ebe ikuku ikuku dị na mbara ya na ebe ọ pere mpe. Ya mere, anyị ga-enwe ike ịmata ozi a naanị site na nyocha ụkpụrụ isobar. Mgbe anyị na-ele ndị iche iche na-etinye na obere okirikiri, etiti ahụ na-egosi etiti nrụgide. Ọ nwere ike ịbụ ma dị elu, yana akara A, yana ala, yana akara B.
Anyị ga-amarịrị na ikuku anaghị agbadata na gradi gradi. Ọ na-agbagharị gburugburu ha n'ihi mmetụta Coriolis (nke ntụgharị ụwa). Ya mere, nkwụsị nke dị na klọọkụ na-efe efe na-asọpụta anticyclonic na-abụghị nke cyclonic. Otu anticyclone dị ka nnukwu okpomọkụ na ihu igwe dị mma. Azụ ikuku a bụ enweghi nsogbu nke ikuku na-eme ka ọ bụrụ oke ikuku. N’ebe dị nso na isobars nọ ibe ha, ike ikuku ahụ na-esiwanye ike.
Nkọwa nke sistemụ nrụgide dị ala na nke dị elu
Mgbe oke mmiri ozuzo na-agakarị na oke mmiri ozuzo na mmụba igwe ojii, ifufe, okpomọkụ na ọdịda. A na-anọchi anya nke a na map ihu igwe nwere isobars jupụtara na ya. Àkú na-aga njem ihu igwe na ugwu ugwu ya na “T” di na etiti isobar.
Ọnọdụ nrụgide dị elu anaghị anọchite anya mmiri ozuzo. Ikuku na-eme nkụ ma H na-anọchite anya ha n'etiti isobar. Akụ na-agbasa na ikuku ikuku. N’ụzọ klọọkụị dị na mgbago ugwu.
Na map ebe ihu igwe ha na-egosi anyị na televishọn, a ga-ahụ ihu ndị gosiri. Ọ bụrụ na n’ihu gafere mpaghara, o yikarịrị ka ihu igwe ga-adị iche. Ugwu na mmiri buru ibu nwere ike ịgbagọ ụzọ gị.
Enwere otutu uzo di iche iche ma ejiri akara di iche gosiputa ha na ihu igwe. Nke mbụ bụ ihu oyi. Mgbe ihu oyi na-agafe na mpaghara, o yikarịrị ka mmiri ozuzo ahụ ọ ga-abụ nke mmiri na ifufe dị ike. Na eserese ihu igwe ha na akara na-acha anụnụ anụnụ na triangles na-anọchi anya ha n'akụkụ akụkụ nke usoro ije site n'ihu.
Dị nke abụọ bụ ihu na-ekpo ọkụ. MỌ na-egosi mmụba nke okpomọkụ ka ọ na-eru nso. Ihu igwe gbachapụrụ ngwa ngwa ka ihu gafere. Ọ bụrụ na igwe ikuku na-ekpo ọkụ na-ejighị n'aka, ụfọdụ oké ifufe nwere ike ime. A na-anọchite ha na map ihu igwe nwere akara uhie na akara ọkara n'akụkụ ebe ha na-aga.
Typedị nke ikpeazụ bụ n'ihu ekpuchi. A na-akpụ ya mgbe ihu oyi na-ebu nke dị ọkụ. Ha na-emetụta ụfọdụ mmetụta ihu igwe dị ka oké ifufe. Enwere ike inwe anwansi na-ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi. Mgbe ihu zoro ezo batara, ikuku na-amị amị. Ha na-anọchi anya ya na-acha odo odo na okirikiri na triangles na ntụziaka nke ifufe.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị mụta ịkọwa map ihu igwe. Ajuju ọ bụla, hapụ ya na nkọwa. Obi ga-adị anyị ụtọ ịzaghachi 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Otu esi agu ma ghọta uzo ihu igwe
Ekele dịrị gị nke ọma ịkọwapụtala, esonyela m n'ịmụta ịkọwa oge nke ọma.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka vidiyo na ederede. Amụtawo m ọtụtụ ihe ma na-achọkwa ihe atụ.
Site n’oké ifufe ahụ i kwuru na ọ dị n’ebe ugwu Italytali, na-eburu n’uche ntụ ifufe nke a ga-akpata, mgbe ikuku si na kọntinent Europe, ọ ga-abụ ikuku kpọrọ nkụ na-enwe obere mmiri ozuzo?
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọkụ ọkụ ọkụ Kilauea
Kedu ihe na etu esi emepụta ihe mgbawa nke cyclogenesis